Somali News 3.16.22
Published March 17, 2022 at 9:56 AM CDT
Badhasaabka Kim Reynolds waxa uu eedayn dusha uga tuuray dugsiyada mar wax laga waydiiyay baaqyada ku saabsan sharciga hubka ee adag ka dib toogasho dhawaan ka dhacday meel ka baxsan Dugsiga Sare ee Bariga Des Moines.
Reynolds waxa uu sheegay in lixda qof ee loo xidhay toogashada iyo saddexda qof ee la dilay ay dhamaantood da’doodu u dhexaysay 14 ilaa 18 jir. Waxay sheegtay in shan ka mid ah aan la diwaangelinin dugsiga, iyo afar ay ahaayeen, laakiin ma aysan joogin fasalka.
Sharci-dajiyayaasha dimuqraadiga ayaa ku baaqay in la adkeeyo sharciyada hubka shir jaraa'id oo ay qabteen Talaadadii.
Saraakiisha sharciga ayaa qorsheynaya inay kordhiyaan roondooyinka fasaxa St. Patrick's Day. War ka soo baxay Waaxda Bilayska Magaalada Sioux ayaa sheegaya in fulinta sidoo kale ay ku jiri doonaan ku xigeenno iyo ciidamo ka socda Xafiiska Sheriff ee Degmada Woodbury iyo Ilaalada Gobolka Iowa.
Ilaalada Gobolka Nebraska ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamadooda iyo dhowr hay'adood oo kale oo sharci fulinta ay raadin doonaan darawallada naafada ah.
Xulashada xeerbeegtida ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Los Angeles ee dacwadda xildhibaanka Mareykanka Jeff Fortenberry. Xildhibaanka sagaalka jeer ee ka soo jeeda Nebraska ayaa wajahaya eedeymo sheegaya inuu ka been sheegay baarayaasha federaalka wax ku saabsan tabarucaad sharci darro ah 2016 ololihiisa oo ka yimid muwaadin ajnabi ah oo uusan si sax ah u shaacinin fayliyada ololaha.
Garoomada diyaaradaha ee gobolka Iowa oo dhan waxay heli doonaan $100-milyan oo doollar oo ah lacagta Qorshaha Badbaadinta Maraykanka ee federaaliga ah.
Toban milyan oo doollar ayaa si siman loo qaybin doonaa siddeed garoon diyaaradeed, oo ay ku jirto Sioux City. 90ka milyan ee kale waxa la qaybin doonaa iyadoo lagu salaynayo taraafikada rakaabka sanadka 2019. Taas macnaheedu waa Sioux City waxay heli doontaa in ka badan $3.1 milyan guud ahaan.